ESI GBANYỤỌ MELITE SKYPE - SKYPE - 2019
Gbanyụọ ọrụ Skype
Ndị ọkwọ ụgbọala bụ mmemme pụrụ iche iji hụ na mmekọrịta nke sistemụ arụmọrụ na ngwaọrụ ejikọrọ na kọmputa. A ga-etinye isiokwu a iji nyochaa otu esi etinye ndị ọkwọ ụgbọala maka HP Scanjet 2400 scanner.
Ịwụnye ngwanrọ maka HP Scanjet 2400 scanner
Anyị nwere ike idozi ọrụ ahụ, ma ọ bụ aka, site na ịga na saịtị nkwado HP, ma ọ bụ na-akpaghị aka, na-eji ngwanrọ ahụ na-arụ ọrụ na ndị ọkwọ ụgbọala. E nwere ụzọ ndị ọzọ gụnyere itinye aka na njirimara ngwaọrụ na ngwaọrụ ngwaọrụ.
Usoro 1: Ụlọ ahịa Nkwado Ndị Ahịa HP
Na weebụsaịtị gọọmentị anyị ga-ahụ ngwugwu dị mma maka nyocha anyị, wee wụnye ya na PC. Ndị mmepe na-enye nhọrọ abụọ - ngwanrọ nke isi, nke na-agụnye naanị ọkwọ ụgbọala n'onwe ya na ngwanrọ nke zuru ezu, nke nwekwara ihe setịpụrụ nke ngwanrọ.
Mgbe anyị ruru na nkwado nkwado, nke mbụ, anyị ga-ege ntị na data akọwapụtara na ngọngọ ahụ "Sistem Sistem Achọpụtara". Ọ bụrụ na ụdị Windows ahụ dị iche na nke anyị, pịa "Gbanwee".
Họrọ usoro gị na ụdị nsụgharị na nsụgharị ma pịa ọzọ. "Gbanwee".
N'ịgbasa mmalite nke taabụ, anyị ga-ahụ ụdị nchịkọta abụọ, nke a kpọtụrụ aha n'elu - nke bụ isi ma zuru ezu. Họrọ otu n'ime ha ma budata na PC gị na bọtịnụ "Download".
N'okpuru ebe a anyị na-enye nhọrọ abụọ iji wụnye ngwanrọ.
Ngosipụta zuru ezu
Anyị na-achọta faịlụ ebudatara na diski ma na-agba ya site na ịpị abụọ. Mgbe njedebe nke akpakaghị akpọrọ, windo mmalite ga-emeghe, nke anyị na-agbanye bọtịnụ ahụ "Ntọala Software".
Jiri nlezianya na-amụ ihe ọmụma na windo na-esote wee pịa "Na-esote".
Nabata nkwekọrịta ahụ na ihe nrụnye nke igbe dị na igbe nchịkwa ahụ wee pịa ọzọ "Na-esote" ịmalite usoro nhazi.
Anyị na-echere ọgwụgwụ nke usoro.
Anyị jikọtara nyocha ahụ na kọmpụta ma gbanye ya. Push Ok.
Ntinye zuru ezu, mechie usoro ihe a na bọtịnụ ahụ "Emere".
Mgbe ahụ ị nwere ike ịgafe usoro ndebanye ngwaahịa (nhọrọ) ma ọ bụ mechie windo a site na ịpị "Kagbuo".
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ịhapụ onye nhazi ahụ.
Mgbe ị na-agbalị ịnwụnye ọkwọ ụgbọala a, anyị nwere ike ịnweta njehie na-ekwu na ọ gaghị ekwe omume ịgba DPInst.exe ọsọ na usoro anyị. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ a, ị ga-achọta ngwugwu ebudatara, pịa ya na RMB ma gaa "Njirimara".
Tab "Njikọ" ịkwesiri igbalite ọnọdụ na họrọ Windows Vista na listi, ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ na-adịgide, mgbe ahụ, otu n'ime ụdị Windows XP. Ịkwesịrị ịlele igbe ahụ "Ikike Ikike Nile"wee pịa "Tinye" ma "OK".
Mgbe ị na-agbazi njehie ahụ, ịnwere ike ịga n'ihu nhazi ahụ.
Mepee faịlụ ngwugwu ma pịa "Na-esote".
Usoro nhazi ahụ ga-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu ntabi anya, mgbe nke a gasịrị, windo ga-emeghe na ozi ị chọrọ ịchọta na bọtịnụ ahụ gosiri na nseta ihuenyo.
Usoro 2: Ihe eji emepụta site na Hewlett-Packard
Ngwa HP niile ị na-eji nwere ike ịnye ọrụ site na iji HP Support Assistant. Ọ, n'etiti ihe ndị ọzọ, na-enyocha ọhụụ nke ndị ọkwọ ụgbọala arụnyere na kọmputa (ọ bụ naanị maka ngwaọrụ HP), na-achọ nchịkọta ndị dị mkpa na ibe ọrụ ma tinye ha.
Download Nkwado HP Support
Na windo mbụ nke nhazi oru, gaa nzọụkwụ ọzọ na bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Anyị kwenyere na okwu nke ikikere.
Pịa bọtịnụ mmalite ka iṅomi kọmputa.
Na-eche maka njedebe usoro.
Ọzọ, anyị na-ahụ nyocha anyị na listi ma malite usoro nke imelite ndị ọkwọ ụgbọala.
Tinye azu ndị na-abụghị ihe ngwugwu nke kwekọrọ na ngwaọrụ ma pịa "Download ma wụnye".
Mkparịta ụka na-esonụ na-elekwasị anya na ngwanrọ e mere iji melite ndị ọkwọ ụgbọala na PC. Ịrụ ọrụ n'ime ihe ọ bụla nwere mpaghara atọ - nyochaa usoro ahụ, na-achọ faịlụ na ihe nkesa na onye nrụnye. Naanị ihe a chọrọ n'aka anyị bụ ịhọrọ ọnọdụ achọrọ na nsonaazụ ahụ.
N'isiokwu a, anyị ga-eji DriverMax. Ụkpụrụ nke ime ihe dị mfe: anyị na-amalite usoro ahụ wee gaa n'ihu nyocha, mgbe nke ahụ gasịrị, anyị ahọrọ ọkwọ ụgbọala ma wụnye ya na PC. Nyocha ahụ n'otu oge ga-ejikọrọ ya, ma ọ bụghị nchọta ahụ agaghị enye nsonaazụ.
Gụkwuo: Otu esi emelite ndị ọkwọ ụgbọala site na DriverMax
Usoro 4: Na-arụ ọrụ na ID ID
NJ bụ otu setịpụrụ agwa (koodu) nke e kenyere ngwaọrụ ọ bụla ejiri ma ọ bụ jikọọ. N'ịbụ ndị natara data a, anyị nwere ike itinye maka ndị ọkwọ ụgbọala na saịtị ndị e mepụtara maka nzube a. Nyocha ID anyị bụ:
Usoro 5: Windows OS Ngwaọrụ
Enwere ike itinye akụrụngwa elu site na iji ngwaọrụ arụ ọrụ. Otu n'ime ha bụ ọrụ ahụ "Onye njikwa ngwaọrụ"na-enye ohere imelite ndị ọkwọ ụgbọala.
Gụkwuo: Ịwụnye ọkwọ ụgbọala site na ngwaọrụ
Biko mara na na usoro ọhụrụ karịa Windows 7, usoro a nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ.
Dịka ị nwere ike ịhụ, ọ dịghị ihe siri ike ịchọta na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka HP Scanjet 2400 scanner, ihe kachasị mkpa bụ ịchọta otu ihe dị mkpa - jiri nlezianya họrọ mpaghara ngwugwu maka nbudata. Nke a metụtara ma usoro mbipụta ahụ na faịlụ onwe ha. N'ụzọ dị otú a, ịnwere ike ijide n'aka na ngwaọrụ ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma na ngwanrọ a.